राजनीतिले शिक्षा क्षेत्र संक्रमित छ ः केदारनाथ खनाल – Shasankhabar
विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध खनाल विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानहरुबाट समेत पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन्, जसमा भानु द्विशतवार्षिकी समारोहको स्वर्णपदक एवं सम्मान, विशिष्ट नागरिक सम्मान सन् २०१८०, लायन्स क्लब अफ नारायणगढ दियालोद्वारा शिक्षा र साहित्यमा योगदान गरेबापत् प्राप्त सम्मान, राष्ट्रिय शिक्षा समिति शिक्षा दिवस २०४४द्वारा शिक्षा सेवा पदकबाट पुरस्कृत, पल्लव साहित्य सम्मान २०६६, हाम्रो मझेरी साहित्य सम्मान २०७२, देवखिना स्मृति पुरस्कार २०७२, विशिष्ट शैक्षिक योगदान सम्मान २०६४, बालकुमारी कलेजबाट कदरपत्र २०७१ लगायतका छन् । खनालका प्रकाशित कृतिहरुमा यात्राका स्पन्दनहरु २०६५, नियात्रासंग्रह, शिक्षा केही गन्थन केही मन्थन निबन्धसंग्रह, उज्यालोको खोजी २०७४, कवितासंग्रह०, अनुभूतिका शब्द तरङ्ग कवितासंग्रह, स्मृतिका बिम्बहरु संस्मरणात्मक निबन्धसंग्रह, दुईधार एक लहर निबन्धसंग्रह लगायत छन् ।
आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त रहनुभएको छ ?
यहाँले शिक्षालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको हाम्रो शिक्षामा सबैभन्दा पहिले खोजिने विषयवस्तु कस्ता हुन्छन् रु तपाईंको विचार वा अनुभवमा उत्कृष्ट शिक्षामा हुनुपर्ने कुराहरु के–के हुन् ?
हाम्रो अब्बल मानिएको गुणस्तरीय शिक्षाले युवाहरुलाई बेरोजगार बनाइरहेको आरोप लागिरहन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
शिक्षाले उच्च शिक्षा हासिल गरेका सक्षम युवाहरुलाई पहिचान दिन नसकेको कुरा समय र परिवेशअनुसार बेलामौकामा खुबै उठ्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्लो समयमा हाम्रो शिक्षा प्रगतिशील, गुणस्तरीय र व्यावहारिक भएन भन्ने जनगुनासो ठूलो छ । जनगुनासो कत्तिको जायज छ ?
शिक्षालाई प्रगतिशील र व्यावहारिक बनाउन हालको शिक्षामा हेरफेर र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु के–के होलान् ?
हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम र अब्बल छ भन्ने कुराहरु पनि आउँछन्, हाम्रो शिक्षामा त्यस्तो विशेषता के छ ?
तपाईं किन शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
पछिल्लो पुस्ताबाट शिक्षा र गुणस्तरमा सुधार कायम गर्न सकिने आधार र आशा के–के छन् ?
नेपालको शिक्षामा कल्पना र इच्छा गरेअनुसार सुधार हुन सकेन, जुन कुरा मानसपटलमा मृगतृष्णाको रुपमा छ । अब शिक्षा सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु के हुन सक्छन् ?
शिक्षाले मानवको व्यक्तिगत जीवन, समाज र राष्ट्रलाई कस्तो प्रभाव छोड्न सक्छ ?
शिक्षालाई गुणस्तरीय र मानवमुखी बनाउन यहाँको मह¤वपूर्ण सल्लाह र सुझाव के हुन सक्छन् ?
शिक्षालाई सुधार गर्ने निकायहरुले अबको समयमा के–के गर्नुपर्दछ रु कस्ता कस्ता व्यक्ति कुन कुन स्थानमा रहनुपर्दछ ?
हाम्रो शिक्षामा सुधार गर्न जनतालाई बुझाउन नसकिएका मह¤वपूर्ण कुरा के हुन् ?
के अहिले दिइएको शिक्षामार्फत शिक्षामा सुधार र समाज परिवर्तन होला ?
— हाम्रो शिक्षामा जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पर्याप्त कुराहरु छैनन् । यहाँको शिक्षाको कमजोर पक्ष भनेको श्रमलाई अनादर गर्ने हो । विदेशमा श्रमलाई सम्मान गरिन्छ । विदेशमा १०ं२ पास गरेपछि विद्यार्थीले हप्ताको २० घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ श्रमको उचित सम्मान हुन्छ । हामीकहाँ पनि श्रमलाई राम्रो सम्मान हुने शिक्षा हुनुपर्दछ ।
तपाईं शिक्षाको विकासका लागि धेरै लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ । शिक्षालाई लिएर विभिन्न आलोचनाहरु गर्ने गरिन्छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईंलाई त्यस्तो आलोचनाको प्रतिवाद वा खण्डन गर्ने स्वतन्त्रता कत्तिको छ ?
हाम्रो शिक्षालाई कसरी सिकाउन सकिएमा त्यसमा दिगोपन आउला ?
शिक्षालाई विश्वसनीय बनाउन सबैको सहमति छ त ?
वर्तमान अवस्थामा शिक्षाको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
कस्ता प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश भएमा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुोला त ?
शिक्षा र साहित्यका बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?
नेपालको शिक्षामा राजनीतिको प्रभाव कस्तो छ ?
— राजनीतिक गतिविधिले शिक्षा क्षेत्र नराम्रो र संक्रमणको अवस्थामा छ । त्यसले शिक्षामा विकृति र विसंगति ल्याएको छ । अनुशासन, आचरण, मर्यादा, नैतिकता र मानवीय मूल्यलाई भुलिएको छ । शिक्षामा असल जग खडा गर्ने नीति र संस्कृत शिक्षालाई सिध्याइएको छ । नामोनिशान नै मेटाई सकिएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ । यी सबै राजनीतिका नै उपज हुन् । चितवन पोष्टबाट साभार